DAAWO: Wasiiradda DF Soomaaliya ee Boosaaso oo loo diiday in ay Odayaal la kulmaan.
BOOSAASO(P-TIMES) – Mid kamid ah wafdiga dawladda Faderaalka Soomaaliya ee tagay magaalada Boosaaso, kuna guuldareystay in ay xal siyaasadeed la gaaraan Madaxweynaha Puntland ayaa u sheegay Warsidaha Puntlandtimes.com in loo diiday la kulanka Odayaasha dhaqanka qaarkood oo codsaday in ay wada hadal yeeshaan.
Wasiir kuxigeenkan ayaa sheegay in ay talaabadaas ka dambeeyeen qaar kamid ah Wasiiradda xukuumadda Puntland, wuxuuna sheegay in ay ficiladaas yihiin kuwa kasoo horjeeda madax banaanida aragtida siyaasadeed.
Sidaas oo kale, wuxuu sheegay in si guud loogu sheegay in howlaha ay u yimaadeen ee la hadalka dawladda Puntland aysan dhaafi karin, wuxuuna tilmaamay in kulan uu la yeelan lahaa subaxnimada hore ee saaka Odayaal beeshiisa kasoo jeeda oo dhawaan cabasho ka muujiyey maamulka Puntland.
Wasiiradda tagay magaalada Boosaaso, waxay ku guuldareysteen in ay wada hadal miro-dhal ah la yeeshaan dhinaca Puntland, waxaana xalay fashilmay wada xaajoodyada markiiba, ka dib markii sharuudaha labada dhinac ay is mari waayeen.
Maamulka gobalka Barri oo ay la xariirtay PuntlandTimes, waxay sheegeen in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in cid loo diiday in ay la kulanto Odayaal dhaqan, waxayna sheegeen in aysan ogeyn xogta noocas ah oo aysan dhankooda amarkaasi bixin.